online game crazy များပြိုင်ကြတဲ့ပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » online game crazy များပြိုင်ကြတဲ့ပွဲ
online game crazy များပြိုင်ကြတဲ့ပွဲ
Posted by မောင် ပေ on Aug 14, 2011 in Society & Lifestyle |9comments
အခု တင်ပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေး က တော့ အခု ပြီးခဲ့တဲ့ ၇ လပိုင်း က torncity ဆိုတဲ့ ဂိမ်းဆိုက်ထဲ က Mr Torn နဲ့ Miss Torn ပြိုင်ပွဲအကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် လည်း torncity ကစား တာ ၃ နှစ်ကျော်ပါပြီ ။ ကျွန်တော် စကစားဖြစ်တဲ့ အချိန် မှာ torncity ရောဂါ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ ရန်ကုန် ၊ မန်းတလေး ၊ တောင်ကြီး ၊ မိတ္ထီလာ နဲ့မကွေးမြို့ တွေ မှာ တော်တော်ကြီး ခေတ်စားခဲ့ပါတယ် ။ ဒီဂိမ်းကစား ဖို့ အတွက် ဦးစွာ register လုပ်ရပါမယ် ။ ဒီဂိမ်းဆိုက်ရဲ့အားသာချက် တစ်ခု က email address ထည့်သွင်းပြီး register လုပ်ရတာ ဖြစ်ပေမယ့် ၊ ဘာ mail မှ မရှိလဲ register လုပ်လို့ ရပါတယ် ။ ဥပမာ areqoewraf;j@gmail.com ဆိုပြီး ၊ ခပ်တည်တည် နဲ့ register လုပ်လို့ ရပါတယ် ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ခန့် က ဆိုရင် ၊ ဒီဂိမ်း ကို ဘယ်လောက် စွဲ ကြသလဲ ဆိုရင် ၊ ဂိမ်းထဲက ပိုက်ဆံ ကို အပြင်မှာ အရောင်းအဝယ် လုပ်ကြ တဲ့ အထိပါပဲ ။
ဒီဂိမ်းရဲ့ သဘော က ၊ register လုပ်ပြီး ပြီ ဆိုတာ နဲ့Torn City ထဲ မှာ လူတစ်ယောက် ဖြစ်သွားပါပြီ ။ ယောက်ျား လား ၊ မိန်းမ လား ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ရွေး ၊ ပြီးရင် ကိုယ့် ဂိမ်းဇါတ်ကောင် ကို အပြင်းအထန် လေ့ကျင်ပေးရပါတယ် ၊ ငွေရှာ ရပါတယ် ။ အပြင်းအထန် လေ့ကျင်တယ် ဆိုတာ က Gym ကစားပေးရတာပါ ။Strength , Speed , Defense နဲ့Dexterity ဆိုပြီး ၄ မျိုး လေ့ကျင့်ပေးရပါတယ် ။ ငွေရှာတာ ကျ တော့ Crime ဆိုပြီး လုပ်ရပါတယ် ။ ကိုယ့် ဂိမ်းဇါတ်ကောင် ရဲ့level အလိုက် crime တွေ ကို လုပ်ရပါတယ် ။ အောင်မြင် ရင် ပိုက်ဆံ ရပါတယ် ၊ ဂိမ်းဇါတ်ကောင် level တက်ဖို့ experience ရပါတယ် ။ မအောင်မြင် ရင်တော့ experience ဆုံးရှုံးပြီး ၊ ကံမကောင်း ရင် ရဲဖမ်း ခံ ရပါတယ် ။ တစ်ချို့ crime တွေ ကြ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရပြီး ဆေးရုံ တက်ရပါတယ် ။ ကိုယ့်ထဲ မှာ medical item တွေ ရှိရင်တော့ ၊ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဆေးရုံမှ လျှင်မြန်စွာ ပြန်ဆင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဂိမ်းကို ဆက်လက် ကစားနိုင်မယ်ပေါ့ ။
ဂိမ်းကစား ရင် ကိုယ့် ဂိမ်းဇါတ်ကောင် ရဲ့ level 15 ကျော်ပြီ ဆိုရင် ၊ ကိုယ်လိုမျိုး ဂိမ်းကစား တဲ့ player တွေ စု ပြီး Faction လို့ ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်း တွေ ဖွဲ့ နိုင်ပါပြီ ။ Faction ဖွဲ့ ပြီး လူစု ပြီးရင်တော့ အပြင်လောက က လူမိုက်အဖွဲ့ အစည်းကြီးတွေ လို ပေါ့ ။ Crime တွေ လုပ် ရပါတယ် ။ ဂိမ်းထဲ က ပိုက်ဆံဝင်ငွေ ပို ရပါတယ် ။ ရံဖန် ရံခါ ကြတော့ လည်း Faction အချင်းချင်း War တွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ တိုက်ခိုက်ရပါတယ် ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဂိမ်းကောင် က Gym ကောင်းကောင်း ကျင့်ထားပြီးမှ ၊ ကိုယ့် ဂိမ်းကောင် ကို တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ လက်နက်တွေ ကောင်းမှ သာ အနိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီ Torn city ထဲ မှာ ကိုယ့် profile မှာ ဓါတ်ပုံတွေ လည်း တင်လို့ ရပါတယ် ။ ယောက်ျား နဲ့ မိန်းမ လည်း အိမ်ထောင်ပြုလို့ ရပါတယ် ။ အိမ်ထောင် ပြု ပြီးရင်တော့ အတူနေလို့ ရတာပေါ့ နော် ။ ဒါကတော့ Torn City ဂိမ်းရဲ့ သဘောအနည်းအကျဉ်းပါ ။ အသေးစိတ် သိချင်ရင် torn.com မှာ ဝင်ကြည့်လို့ ရပါတယ် ။ ပုံလေးတွေ ကို ကြည့် ကြပါဦး ခင်ဗျား ။
ပထမ ၊ ဒုတိယ နဲ့ တတိယ ရတဲ့ ပုံတွေ ကို ပဲ တင်လိုက်ပါတယ် ။ ပုံမတင် တတ်ပါသဖြင့် အစီအစဉ် တကျ မဖြစ်တာကို လည်း နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ ခင်ဗျား ။ ကျွန်တော် တို့ ဗမာနိုင် ငံ က ကစားတဲ့ သူတွေ ရဲ့ ပုံတွေ ပါ တွေ့ နေရသော်လည်း ၊ privacy ချိုးဖောက်ရာ စိုးသဖြင့် ၊ ပဒုတ ကို ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် နော်
အပေါ်ဆုံး က အနီ နဲ့ တစ်ယောက် က Miss Torn
သူ့ အောက် က ဒုတိယ
အောက်နားမှာ ယောက်ျားပုံဘေး က အနက် နဲ့ က တတိယ ဆုပုံပါ ။
ယောကျားပုံ ၃ ပုံအနက် အလယ်က ပုံ က Mr Torn
အောက်ဆုံးက ဆေးထိုးအပ် နဲ့ ပုံက ဒုတိယ
သေနတ် ကိုင်ထားတဲ့ ပုံက တတိယ ပါ ။
နံပါတ် တွေ ပါနေနေတာ က game id no တွေ ပါ
upload လုပ်တုန်းက description မှာ ရေးလိုက်ပေမယ့် ၊ တစ်ကယ် publish လုပ်တော့
အဲတုန်းက Torncity,Wow,NarutoArina အွန်လိုင်းဂိမ်းတွေ ခေတ်စားခဲ့သေးတယ်..
တငယ်ဂျင်းတွေ..ပြောပြလို့ ..Torncity အကောင့်လုပ်ခဲ့သေးတယ်..မကစားတတ်လို့ ..လှည့်ကိုကြည့်တော့ဘူး
Naruto ကတော့ ခလေးတွေကစားတာများတယ်..Torncity ကတော့..ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ..ကစားတာ အများဆုံး တွေ့ ဖူးတယ်.
အနော်ကတော့ တီဗွီဂိမ်းပေါ်ကာစက ကစားတဲ့ မာရီရို-Mario တောင် အဆင့်မတတ်ဘူး.
ဝင်ဆွေးနွေးတဲ့ အတွက် မင်္ဂလာပါ ကိုပေါက်ဖော်
ဒီ TornCity ဂိမ်းဟာ ၂၀၀၉ လောက်တုန်း က
မြန်မာနိုင်ငံ က လူတွေ အရမ်းဆော့ကြတယ်ဗျ
ဂိမ်းထဲ မှာ သုံးရတဲ့ ပိုက်ဆံ ကို အပြင်မှာပါ ရောင်းစားကြတဲ့ အထိ ပဲ ။
ရန်ကုန် က မြေနီကုန်း နား က ဂိမ်းဆိုင်တွေ ၊ အင်တာနက် ကဖေး တွေ မှ ရတယ်တဲ့
မန်းတလေး က တော့ မိန်းဘက် က ဂိမ်းဆိုင်တွေ မှာ ရတယ်
အစောပိုင်း ဂိမ်းထဲက ပိုက်ဆံ သိန်း၅၀၀ ကို အပြင်မှာ မြန်မာကျပ်ငွေ ၁သောင်း နဲ့ ရောင်းဝယ်ကြတယ်
နောက်ပိုင်း မန်းတလေး က ကလေး တွေ ဈေးကွက်ဖြတ်လိုက်လို့ 
သူ က ဂိမ်းဆိုက်ထဲ မှာတင် ကို တစ်ခြားပြိုင်ပွဲလေးတွေ
အမျိုးမျိုးမရိုးအောင် တစ်လ တစ်ကြိမ် လုပ်ပေးတယ်ဗျ
သည်ဂိမ်းရဲ့ စတိုင် က ပြင်ပ လောက လူနေမှုနဲ့ ၅၀ ရာနှုန်းလောက် တူနေတော့
တစ်နာရီကို ဆိုက်ထဲ ဝင်ကစားသူ အယောက် ၄၀၀၀၀ ရှိတယ် ဆိုပဲ
တစ်ကမ္ဘာလုံး က တော်တော်များများ ကစားကြတာ ပါ ။
i m born in Mandalay, so .. i really like Mandalaygazette. :D says:
ကိုဝင်းတော့ကာ က ဘယ်နာမည်နဲ့ဆော့နေတာလဲဗျ .. ကျွန်တော့်မှာလည်း အကောင့်တွေအများကြီး
ရှိတယ် .. လယ်ဘယ်တော့နည်းပါတယ် .. ဘော်ဒါတစ်ယောက်ကတော့ အရမ်းကရေစီပဲ .. Luke_Donald  လယ်ဘယ် ၈၁ နဲ့ .. မန်းနီးလဲ တော်တော်ပေါတယ် .. ဘတ်တယ်စတပ်က ၄ ဘီလောက်ရှိတယ် ..
ကျွန်တော့် အကောင့် က ငချွတ်ကလေးပါဗျာ (နာမည် မဟုတ်ဘူးနော်)
အကောင့်နာမည်တော့ မမေးပါနဲ့ နော်
လာရိုက်သွားမှာ ကြောက်လို့ 
အခုတော. wow ပဲကစားကြတော.တယ်ဗျ ကျနော်တို. ဆယ်ကျော်သက်တွေလေ ဟဲဟဲ
ဖိုးတွမ်တိ လေး ရဲ့ 
ကျော်သက် တော့ မလုပ်နဲ့ နော်
For dota fans…
The world’s best dota teams will be competing for the highest prize USD 1 Million in 17-21 August in Germany. And you can view their plays online live.
For more info: http://dota2.com/
ကျွန်တော်လည်းဆော့ဖူးပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးခြောက် နှစ်လောက်ကပါ။ Lvl အတော်ကလေးရောက် မှ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက် ကျွန်တော့်အကောင့်ကို ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လည်းမသိဘူး ။ ကျွန်တော်ဘဏ်ထဲမှာရှိတဲ့ ပိုက်ဆံတွေရော ပှိုင့်တွေရော ပြောင်သွားပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ သိပ်မကြာဘူး ကိုယ့် အကောင့်ကို ကိုယ်ပြန်ဖွင့်လိုက် တာ စောစောက ကျွန်တော် ပိုက်ဆံတွေခိုးသွားတဲ့လူရဲ့ ကောင့်ဖြစ်နေတယ်။ ပိုက်ဆံက လည်း သန်းပေါင်းများစွာ ရလိုက်တယ်။ နောက် ယာခူဆာ ဓါးတို့ဘာတို့ ၀ယ်လို့မရတဲ့ ပစ္စည်းတော်တော်များများလည်းရလိုက်တယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းလည်းကျွန်တော်မသိဘူးး အဲဒီအကောင့်ပိုင်ရှင်ဆိုရင် ကျွန်တော်ကို မက်ဆေ့ကနေ ဆဲတာ ။အကောင့်ပြန်တောင်းတာ ဆိုတာ အခါမနည်း ပါဘူး။ ဒါက ကျွန်တော်လည်းလုပ်တာ မဟုတ်တော့ ဘယ်လိုပြန်ပေးရမှန်းလည်းမသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ နောက် တစ်နှစ်လောက်လည်းကျေ၇ာ အဲဒီဆိုဒ်က ကျွန်တော့်ကို ဖက်ထရယ် ဂျေး ကိုပို့လိုက်ပြီး အကောင့်ကို ဘမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။ အဲဒီကတည်းက ပြန်မဆော့တော့တာ အခုထိပါပဲ..။